SUPERBAHİS630 MUSTAFA CENGİZ'DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! - RESTBET501.COM GİRİŞ
SUPERBAHİS630 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER!
November 29, 2020 RESTBET 501 RESTBET501 14
အဝါရောင်ကလပ်အသင်းဥက္ကchairman္ဌ Mustafa Cengiz ကသူသည်ထူးခြားသောရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရသည့်အထွေထွေညီလာခံတွင်သမ္မတလောင်းဖြစ်မဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Mustafa Cengiz သည်ကလပ်အသင်းဖောင်ဒေးရှင်းအစည်းအဝေးပြီးနောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Mustafa Cengiz ၏ဖော်ပြချက်များမှာ
ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်မှ ၂၆ ရက်ထိရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပရန်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ Mustafa Cengiz “ဟုတ်ပါတယ်၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေပေးခဲ့တာပါ။ ကျနော်တို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်ပြီးနောက်သူဟာ Ankara ကိုသွားခဲ့တာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တက်ရောက်သူနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းများကိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားတရားဝင်အသိပေးခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းကိုမယုံသောအချို့ရှိခြင်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ သူသည်တာ ၀ န်ရှိသလားကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။ တရား ၀ င်ဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ဆိုင်းသင့်ကြောင်းတရား ၀ င်စာဖြင့်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ သူ၏အစီရင်ခံစာကိုပင်ဖတ်ရှုခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ဥပဒေအရအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်ခြင်းကိုလည်းကျူးလွန်ခဲ့သည်။
သူသည်အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်ကလပ်တွင်ထပ်မံဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်လားဟူသောမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ Mustafa Cengiz “ငါဟာသမ္မတလောင်းဖြစ်မလားဆိုတာကိုပြောခွင့်ပြုပါ။ မေလ ၇ ရက်နေ့ကစပြီးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုဘယ်သူမှငါ့ကိုမမေးခဲ့ဘူး။ ငါကဲ့ရဲ့ခြင်းအဘို့ငါမပြောတတ်အတော်လေးသဘာဝ။ သင်နေမကောင်းလျှင်, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာဘာလုပ်နေလဲ။ သင်အစေခံရန်သွားလျှင်, သင်ကျန်းမာပါလိမ့်မည်။ ငါ၏အဖြစ်စဉ်ကိုအခုအချိန်မှာကောင်းစွာတိုးတက်နေပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှလုပ်ရပ်ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လိမ့်မည်ဘယ်တော့မှဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။ ငါတတ်နိုင်သမျှငါကိုချစ်။ ပြင်ပကနေကြည့်လိုက်ရင်ဒါကအဓိပ္ပါယ်မဲ့နေပုံရတယ်။ ငါမတိုက်နိုင်ဘူး၊ နိုင်ငံရေးထဲဝင်လို့မရဘူး၊ စီးပွားရေးအရအကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိဘူး။ ငါဟာအစိုးရ ၀ န်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီ။ ငါအလုပ်အကိုင်ဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ငါတတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏မိသားစုနှင့်ဆရာဝန်များကိုကြည့်ရှုပါကသူတို့သည်ကျွန်ုပ်အားအတိတ်ကာလမှလွတ်မြောက်စေခြင်းမှထွက်ခွာသွားစေလိုသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနောက်တွင်ရှိနေသည်။ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် Mustafa Cengiz “သူတို့အားလုံးဟာအဖိုးတန်တဲ့လူတွေဖြစ်ပြီးဂယ်လတ်စတာမှလာကြတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာတစ်ဖက်ကလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဒီဟာကဒိုင်းနမစ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကိုငါတို့မျှော်လင့်ချင်တယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုခုခံတွန်းလှန်နေသည်ဟုထင်သောအပိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပယ်ရှားမည်မဟုတ်ပါ။ အတူယှဉ်ပြိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Er Square ကိုဖွင့်လှစ်နေပါသည်။ အသုံးပြုထားသောအသုံးအနှုန်းများ။
RESTBET501 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! RESTBET501 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! SULTANBET542 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! BETBOO868 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! BETBOO868 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! SUPERBAHİS29 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! SUPERBAHİS221 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER! BETBOO618 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ BETBABA138 ‘FATİH TERİM’E DAHA FAZLA YETKİ VERİLMELİ!’ RESTBET501 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER
14 Comments on SUPERBAHİS630 MUSTAFA CENGİZ’DEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER!
MEHMET November 29, 2020 at 11:50 pm
restbet casino papara ile ödeme alan var mı ?
ÇAĞLA November 30, 2020 at 9:30 am
restbet kayıt yaşım 19 bahis oynayabilir miyim
ERHAN December 1, 2020 at 3:30 pm
YASEMİN December 3, 2020 at 1:30 am
FEYZA December 3, 2020 at 11:30 pm
restbet canlı casino kullanıcı yorumları olumlu olan ve ödemeleri sağlam bir site.
SAMET SANCAR December 4, 2020 at 12:00 am
restbet canlı izle yatırım miktarı ne olmalı
MUSTAFA GÜRHAN December 5, 2020 at 10:40 am
restbet kayıt kayıt olsam mı diye düşünüyorum.
SÖYLEM December 6, 2020 at 8:20 am
restbet yeni adresi sorunsuz bonuslar sunan bir site.
DENİZ December 7, 2020 at 9:20 pm
restbet canlı bahis sağlam mı bu site
ZEYNEP December 11, 2020 at 5:40 am
ÖZHAN December 11, 2020 at 5:50 am
BUĞRA December 11, 2020 at 5:30 pm
FIRAT December 12, 2020 at 12:20 pm
restbet yeni adresi en yeni adresi bu oldu burdan girin amk.
TEVFİK ÖZGÜN December 12, 2020 at 12:30 pm
restbet canlı casino sağlam bahis oynama ortamı sağlayan bir site.